Cabdisiciid Muuse oo fowdo siyaasadeed ka wada Gaalkacyo | KEYDMEDIA ENGLISH
Cabdisiciid Muuse oo fowdo siyaasadeed ka wada Gaalkacyo
Dhacdadaan, ayaa ku soo aadeysa, xilli uu jiro khilaaf xooggan oo dhawaan ka dhex qarxay, Siciid Deni iyo Madaxweyne ku xigeynkiisa Axmed Karaash, khilaafkaas ayaana dhashay kadib markii Deni, ku dhawaaqay inuu u sharraxan yahay xilka Madaxweynaha Soomaaliya
GAALKACYO, Soomaaliya – Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cabdisiciid Muuse, ayaa lagu eedeeyay inuu fowdo siyaasadeed ka wado degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, kadib iska hor imaad ciidan oo xalay ka dhacay magaalada.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug, dhinaca Puntland Cabdiladiif Muuse San-yare, ayaa sheegay in Cabdisiciid Muuse, oo ka mid ah adeegayaasha Farmaajo, uu masuul ka yahay, shaqaaqooyinka xalay dhacay, u jeedkiisuna yahay kicinta fowdo amni.
Ugu yaraan hal askari ayaa dhintay saddex kalana waa ay dhawacmeen, kuwaas oo uu ka mid ahaa taliye ku xigenkii qeybta booliska Gobalka Mudug dhanka Puntland, Cabdisiciid Xuseen Jamac, sida uu sheegay maamulka dhanka Waqooyi ee degmada.
Isku dhaca ayaa yimid, kadib markii ciidanka Boolisku is hor istaag ku sameeyeen, kulamo siyaasadeed oo Wasiirka Arrimaha Dibaddu ka waday magaalada maalmihii la soo dhaafay, kuwaas oo Villa Somalia dooneyso in ay fowdo kaga abuurto Gaalkacyo.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug dhinaca Puntland, San-yare, wuxuu sheegay in Cabdisiciid, ka biya diiday amar ka soo baxay guddiga amniga, kaasoo yoolkiisu ahaa in magaaladu aysan xamili karin kulamo siyaasadeed oo lagu abaabulayo dano gaar ah.
“Dhibaatada dhacday dhamaanteed waxaa leh, ninka Wasiirka Arrimaha Dibadda ah, oo labadii sano ee la soo dhaafay xumaantaas ka shaqeynayay, wuxuu kala soocay ciidankii, wuxuu mushuqay gargaarkii, wixii dhacay waa lagula xisaabtamayaa”, ayuu yiri, Sanyare.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale, Cabdisiciid, ku eedeyay inuu ka shaqeynta dhibaateynta gobolka soo billaabay markii uu ahaa Talaliyaha Amniga Farmaajo, kaliyana shaqadiisu tahay falkinta xumaanta, wuxuu ku tilmaamay shaqsi matoor sheydaan saaran yahay.
Dhacdadaan, ayaa ku soo aadeysa, xilli uu jiro khilaaf xooggan oo dhawaan ka dhex qarxay, Siciid Deni iyo Madaxweyne ku xigeynkiisa Axmed Karaash, khilaafkaas ayaana dhashay kadib markii Deni, ku dhawaaqay inuu u sharraxan yahay xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa gadaal ka taagan Garaash, waxaana degmooyinka Maamulka iyo Caasimaddaba ka socda, abaabulka kulamo, si weyn looga soo hor jeedo Deni, kuwaasoo ay qarash xooggan ku bixineyso Villa Soomaalia.
Siciid Cabdullaahi Deni, oo hore loogu eedeeyay inuu ku fashilmay, hoggaanka Bari iyo Nugaal, aya hadda u taagan tartanka xilka ugu sarreeya dalka, wuxuuna ku sugan yahay Muqdisho, xilli maamulkii uu hoggaanka u ahaa xasarado siyaasadeed ka taagan yihiin.